Mitanilanila • AoRaha
Mitohy dimy ambin’ny folo andro indray ny hamehana ara-pahasalamana manerana ny Nosy. Ny alina mangina sy ny tapak’andro hariva mahafoana ny mpandeha an-tongotra eny an-dalam-be ihany, hatreto ary efa ho roa volana izao, no nahatsapana fa miaina ao anatin’ny hamehana marina isika (ho an’ny eto Analamanga, indrindra indrindra). Sasa-poana kosa ny fampiharana ny fitsipika aman-dalàna ivelan’ireo fotoana ireo.
Miady isika nefa sady manome vahana ny fahavalo. Manidy trano isika mba tsy hahafahan’ny mpifanandrina amintsika hanafika ao an-trano, saingy mitanilanila ny varavarana. Miverimberina foana io tsapa io nandritra an’ireo vanim-potoanan’ny hamehana ara-pahasalamana inefatra miantoana! Rariny ny fifandirana sy fanehoan-kevitra manitsy manao hoe: « na manao na tsy manao », fa tsy misy toeran’ny marimaritra mihitsy ny ady amin’ny valanaretina coronavirus, ankehitriny.
Zary samy miezaka mifaminany ny any anatin’ny eritreritry ny tsirairay any ny mpitondra sy ny vahoaka: ny mpitondra mihevitra fa manana vahoaka hendry sy matahotra ka tsy tokony hanahirana ny handresena an’ilay valanaretina rehefa mametraka an’ireo toromarika sy fepetra isan-karazany; ny vahoaka kosa manantena fa manambahaolana hatolotra hatrany ny fanjakana, na inona na inona toe-draharaha miseho eo, hany ka manjaka ilay fisainana mandeha ho azy satria ny hatramin’izay aza vita ihany na nisy na tsy nisy ny coronavirus !
Manosika ny sasany hanao zinona ny fepetra fiarovana sy fisorohana mila tohizana ny fahitana an’ilay tambavy Covid-organics na CVO, na koa ny tsy fisian’ny olona matin’ny coronavirus teto Madagasikara, eny fa na lasa nidangana aza ny tarehimarika nivoaka momba an’ireo olona marary vaovao teo, tao anatin’ny andro vitsivitsy izao. Maro no misioka sahady na dia mbola tena ao anatin’ny ala mikitroka aza. Iny navoaka ofisialy, omaly, iny ny fahafatesana voalohany avy amin’ny tsimok’aretina “Covid-19” teto amintsika.
Iaraha-manaiky ny fiandrandran’ny an-daniny sy ny ankilany ny fijanonan’izao hamehana ara-pahasalamana lavareny izao, saingy mitoetra ny tsy fandanjalanjana ny fihetsika sy fiteny tokony hatao mba hahatongavana amin’izany.
Goragora tokoa ve sa aiza ny lesoka amin’ny fampiharana sy fampanajàn’ny fanjakana an’ireo fanapahan-kevitra raisiny? Tokony hanan-tsafidy amin’izay toromarika sy fepetra tiany hoarahina fa mahametimety ny fiainany ve ny isam-batan’olona, nefa ny tsy fitandreman’ny iray monja dia mampidi-doza amin’ny olona maro? Eto isika izao. Hiatrika ny dimy ambin’ny folo andro manaraka. Efa terena ho resaky ny moana sy marenina kosa, angamba, raha tsy mandray ny lesona tsy azo hatramin’izay.